बालकमाथि पनि हुन्छ ‘बलात्कार’ – radiokaski.com बालकमाथि पनि हुन्छ ‘बलात्कार’ – radiokaski.com
बालकमाथि पनि हुन्छ ‘बलात्कार’
१२ र १४ वर्षीय नेपाली बालकलाई यौन दुराचार गरेका कारण ६३ वर्षका क्यानडाली नागरिक पिटर डग्लस अहिले जेलसजाय भोगिरहेका छन् ।
काभ्रे जिल्लाको मण्डनदेउपुरमा नेपाली दुई बालकमाथि यौन दुराचार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका उनी दोषी ठहर भई ९ वर्षका लागि जेल गएका हुन् ।
नेपाली बालकहरूलाई यौन शोषण गर्ने, उनीहरूको अश्लील भिडियो बनाउने, सर्वाङ्ग फोटोहरू खिच्नेलयायतका अपराध उनले गर्दै आएका थिए । त्यही क्रममा प्रहरीले निगरानी गरेपछि उनी पक्राउ परेका हुन् ।
नेपाली बालकहरूलाई यौन दुराचार गरेको आरोपमा फक्राउ परेका विदेशी नागरिकहरूमा डग्लस सम्भवतः हाई प्रोफाइल हुन् । स्ट्रिट किड्स इन्टरनेसनल नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था स्थापना गरेर बालअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील उनलाई सन् २०१६ मा क्यानडाको सरकारले सर्वोच्च नागरिक सम्मानद्वारा सम्मान गरेको थियो ।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तगर्तको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को नेपाल कार्यालयका चिफ टेक्निकल एड्भाइजरका रूपमा सन् २००२ मा काम गरेका थिए । त्यही बेला उनको अस्वाभाविक व्यवहार देखेर प्रश्न पनि उठेको थियो तर प्रमाण नभएका कारण उनी जोगिएका थिए ।
पछि अर्को संस्थाको प्रमुख भएर उनी अफगानिस्तान गए । त्यति बेलादेखि नै उनी बारम्बार नेपाल आउने, पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा बालकहरूलाई लिएर घुम्न जाने गर्थे ।
पोखरा, सौराहलगायतका क्षेत्रमा बालकहरूलाई लिएर हिडिँरहेको देखेपछि सीआईबीले पिछा गर्दा उनी नगरकोटनजिकबाट पक्राउ परेका हुन ।
उनीजस्ता यौन दुराचारीहरू नेपालमा थुप्रै पक्राउ परेका छन् । नेपाली बालकलाई यौन दुराचार गरेर भागेका नागरिकलाई युरोपेली देशहरूले आफ्नो देशमा पक्राउ गरी मुद्दासमेत चलाएका उदाहरणहरू छन् ।
फ्रान्समा समेत बालयौन दुराचार गरी फरार भएका ६९ वर्षीय इगोर सिमास्की ठमेलको एक होटलमा एक बालकलाई यौन दुराचार गर्दागर्दै रङ्गेहात पक्राउ परेका थिए ।
७ पटकसम्म नेपाल आएर धेरै बालकलाई यौन दुराचार गरेको उनले बयान दिएका थिए ।
रविभनमा अपार्टमेण्ट लिएर बसेका ५५ वर्षीय बेलायती नागरिक आईएन रोबट कोलेले शिक्षा दिने नाममा बालकहरूलाई यौन दुराचार गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो ।
यस्तै, फेसबुकबाट साथी बनाई १६ वर्षीय बालकलाई चाबहिलको एक होटलमा यौन दुराचार गर्दै गरेको बेला ६६ वर्षीय स्वीस नागरिक पिटर क्रिश्चियन ल्यागेनड्रोफ पनि पक्राउ परे । भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा रहेको उनको होटलमा समेत बालकहरू लगी यौन दुराचार गर्ने गरेका थिए ।
विगत ८ वर्षदेखि नेपालमा बस्दै आएका उनले रसुवा, काठमाडौंलगायतका क्षेत्रमा बालबालिकालाई शैक्षिक सहयोग गर्दै आएका थिए भने चाबहिल र भक्तपुरमा होटल सञ्चालन गरेका थिए ।
यसैगरी, भोटेबहालमा डेरा गरी बसेका ६३ वर्षीय जर्मन नागरिक योगेन भन्ने हान्स जर्गन गुस्ताभ धाम पनि नेपाली बालकहरूलाई यौन दुराचार गरेको आरोपमा पक्राउ परे ।
बालगृहहरूबाट बालकहरूलाई आफ्नो डेरामा ल्याएर यौन शोषण गर्ने गरेको पुष्टि भएपछि अहिले उनी जेलसजाय भोगिरहेका छन् । प्रहरीले उनको डेराबाट एकसाथ दुई बालकलाई उद्धार गरेको थियो ।
ती बालकको बयानपछि अरू बालगृहका बालकलाई पनि उनले पीडित बनाएको खुल्यो । १० वर्षदेखि नेपाल आउनेजाने गरेका उनले कति नेपाली बालकहरूलाई आफ्नो यौन जालमा पारे भन्ने अहिले पनि रहस्यमै छ ।
कोटेश्वरको एक होटलबाट नेदरल्याण्डका ७५ वर्षीय हेनेरियस एड्रियन पनि एक बालकलाई यौन दुराचार गरिरहेको बेला रङ्गेहात पक्राउ परेका थिए ।
बालकहरूलाई मीठो खान दिने बहानामा होटलसम्म ल्याएर यौनदुराचार गर्ने गर्थे ।
यस्तै, १० देखि १४ वर्षसम्मका बालकहरूलाई यौन दुराचार गरेको आरोपमा एकसाथ दुई फ्रान्सेली नागरिक ४२ वर्षीय क्रिस्टोफे ग्योलक्स र ३८ वर्षीय मिचेल चुपाउलाई पनि सीआईबीले पक्राउ गरयो । बिजनेस भिसामा नेपाल आएका चुपाउ प्रान्समा पनि यौनदुराचारको आरोपमा पक्राउ परेका थिए ।
यस्तै, नेपाली बालकहरूमाथि यौन दुराचार गरिरहेको बेला पक्राउ परेका अर्का चर्चित व्यक्ति हुन् जर्मन नागरिक डा. न्यौलर मेनहर्ड । उनी चितवनको सौराहबाट रङ्गेहात पक्राउ परेका थिए । ल्यापटप, क्यामेरामा उत्तेजक फोटो र बालकहरूका नाङ्गा फोटोहरूसहित पक्राउ परेका ६१ वर्षीय मेनहर्ड सामान्य धरौटीमा मुक्त भए ।
महिलामाथि पुरुषबाट बलात्कार हुन्छ भन्ने हाम्रो सामाजिक तथा कानुनी मान्यताका कारण उनीमाथि यौन दुर्व्यवहार मुद्दाको सट्टा ‘सार्वजनिक अपराध’ गरेको मुद्दा दर्ता गरियो । २ हजार रूपैयाँ धरौटी बुझाएर ती व्यभिचारीे रिहा भए ।
प्रसङ्ग उनले कस्तो अपराध गरे र कस्तो सजाय पाए भन्ने मात्र होइन, पर्दाभित्र नेपाली बालकहरूले कस्तो पीडा भोगिरहेका छन् र त्यसलाई हामीले कसरी सामान्य मानिरहेका छौँ भन्ने हो ।
मेनहर्डले प्रहरीमा दिएको बयान, ‘बालकहरूका सर्वाङ्ग फोटो खिच्नु, चित्र बनाउनु मेरो सोख हो ।’
यसले के संकेत गर्छ ? यौन हिंसा वा दुर्व्यवहार भन्नेबित्तिकै हाम्रो पितृसत्तात्मक देशमा बालकमाथि हुने यौनहिंसालाई पुरुषार्थमा जोडेर हेरेको पाइन्छ । अर्थात् पुरूषबाट महिला पीडित छन्, पुरुष होइन । तर यथार्थ यो सोचाइभन्दा विल्कुलै फरक छ ।
बालकहरू यौनहिंसामा परेका उदाहरण प्रशस्तै पाइन्छन् । सामाजिक सेवाका आवरणमा यस्ता कुकृत्य नेपालमा संस्थागत रूपमै फस्टाएको छ । जसका मतियार स्वयम् नेपाली नै हुने गरेका छन् ।
नेपाली बालकमाथि विभिन्न बहानामा गरिएका यी यौन शोषणका पीडकहरू केवल प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । बाह्य पर्यटनसँगै यौन दुराचारीहरू (पेडोफिल) पनि आउने गर्छन् । बालकसँग नजिक हुँदै विदेशी नागरिक माया र स्नेहमार्फत थाहा नपाउने गरी यौन दुराचार गरेको पाइएको छ ।
बालगृह, विद्यालय, स्वयम्‌सेवकजस्ता नाममा आएर नेपाली बालकमाथि यौनशोषण गरेका घटनाहरू निरन्तर बाहिर आउन थालेका छन् ।
‘यसो नगरे वयष्क भइँदैन’ भन्दै यौनाङ्ग छुन, चलाउन लगाई गरिएको यौन दुर्व्यवहार कसरी बाहिर आउँछ ? साथै, नुहाउँदा, कपडा चेन्ज गर्दा, बालकलाई माया गरेजस्तो गरी यौनाङ्ग छोएर सुरू हुने दुराचार अप्राकृतिक यौन सम्पर्कसम्म पुग्न, लाग्न धेरै समय नलाग्ने स्वयम् दुराचारीहरूले बयान दिने गरेका छन् । जब कि हामी बालकमाथि यौनहिंसा भएको विश्वास नै गर्न सक्दैनौँ ।
विश्वव्यापी अध्ययनहरूको दाबी छ– जब एक वयष्क र एक बालबालिका नजिक वा एकान्तमा हुन्छन्, तब यौन दुर्व्यवहारको शृङ्खला सुरू हुन्छ ।
यसमा प्रत्येक ४ वटा घटनामा एक बालक पीडित भएको पाइनेसमेत उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले सन् २००२ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा भित्रिने पर्यटकमध्ये ६७ प्रतिशत पर्यटकले सडक बालकहरूलाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने गरेको उल्लेख छ ।
यस्तै, सन् २००८ मा भ्वाइस अफ चिल्ड्रेन र सीपीसीएस नामक दुई संस्थाले गरेको एक अध्ययन अनुसार ७० प्रतिशत सडक बालबालिकाहरू विदेशी यौन दुराचारीबाट पीडित भएका छन् । शक्ति, नाता र सम्बन्धको दुरुपयोग गरी बालबालिकामाथि यौन आशय झल्कने कुनै पनि व्यवहार यौन दुर्व्यवहार हो ।
बलात्कारबाहेक, यौन आशय राखी चुम्बन गर्नु, संवेदनशील अंगहरू चलाउनु तथा चलाउन लगाउनु, अश्लील चित्र चलचित्र हेर्न लगाउनु, नग्न तस्वीर खिच्नु, मुख मैथुन, गुँदद्वार मैथुनजस्ता क्रियाकलाप यौन दुर्व्यवहारका लक्षण हुन् । विशेष गरी विदेशी नागरिक यिनै तरिकाबाट नेपाली बालकहरूलाई यौन दुर्व्यवहार गरिरहेका छन् ।
विदेशी नागरिकले नेपाली बालकमाथि गर्ने यौनशोषण शारीरिक र मानसिक दुवै तवरले गहिरो हिंसा हो । माया गरेजस्तो गरी लामो समयको अन्तरालमा हुने यस्तो यौन शोषणले धेरै बालक पीडित बनिरहेका छन् ।
यसरी यौन दुर्व्यवहार गर्ने उद्देश्य लिएर आएका विदेशी नागरिकहरूको प्रोफाइल हेर्दा समाजमा प्रतिष्ठा कमाएको र उसमा सामाजिक सेवा गर्ने भावना भएको पाइन्छ । यसो भन्दैमा सबै खराब भन्न खोजिएको पक्कै होइन । तर भित्र लुकेको दुराचारी लक्षण १० वर्षपछिसमेत खुलेका उदाहरणहरू छन् ।
पछिल्लो समय पर्यटकीय क्षेत्रहरू काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा, चितवनको सौराहामा बढिरहेको बालगृह, स्वयम्‌सेवी संस्था (विदेशबाट स्वयम्‌सेवकहरू ल्याई अरू संस्थामा पठाउने) र ती संस्थामा देखिने विदेशी नागरिकको बाक्लो उपस्थितिले के संकेत गर्छ ? आवासीय रूपमा बालगृहमा विदेशी नागरिक बस्न नपाउने नियमको बर्खिलाप मात्र भएको छैन, बालकहरूलाई घुम्न लैजाने भन्दै दिनभर संस्थाबाट बालक र विदेशी नागरिक एकान्तमा रहँदा भएका घटनाहरूको जिम्मेवार को हुने ?
यसैगरी, विगतमा नेपालमा आएका फ्रेन्च एनी चार्लोटी लाउरी, बेलायती निकोलास आर हेवार्ड, डेनमार्कका डा. काफ्रिटङ लुकास, बेलायती क्रिष्टिफर रोय फ्रेजर जेनकिन्सलगायत विदेशी नागरिकहरू यौन दुराचारको आरोपमा नेपालमा पक्राउ परिसकेका केही विदेशी नागरिक हुन् भने नेपालमा बालकलाई यौन दुराचार गरी फर्केको आरोपमा आफ्नै देशमा समेत उनीहरू पक्राउ पर्न थालेका छन् ।
कानुन र फैसला
नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले मात्र होइन, नेपाली कानुनले समेत बालकमाथि बलात्कार हुन सक्ने ठहर गरिसकेको छ र अदालतबाट बालकहरूको पक्षमा फैसलाहरू आउन थालेका छन् ।
पिटल डग्लस ९ वर्षका लागि जेल गएका छन् । यस्तै, भारतीय नागरिक अशोक रावले पोखरामा ९ वर्षका बालकलाई यौन दुराचार गरेको पुष्टि भएपछि १० वर्ष १ महिनाको जेल सजाय भोगिरेहका छन् ।
पोखरामा नै १५ वर्षका बालकलाई यौनशोषण गरेको आरोपमा जर्मन नागरिक हान्स क्रिस्टाेफलाई जिल्ला अदालतले सुनाएको ८ वर्षे जेल सजाय भोगिरहेका छन् ।
ठमेलको एक होटलबाट यौन दुराचार गर्दागर्दै बालकको साथमा पक्राउ परेका डच नागरिक पिट ह्यान भान तेरविस्गालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले ७ वर्ष कैद सुनाएको छ र उनी सो सजाय भोगिरहेका छन् ।
फौजदारी संहिता २०७४ ले १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालकलाई यौन दुराचार गरे जन्म कैद, १० देखि १४ वर्षसम्मकालाई यौन दुराचार गरे १८ देखि २० वर्ष कैद र १८ वर्षसम्मकाे बालकलाई यौन दुराचार गरे १० देखि १२ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ । साथै, धेरै घटनामा बालकहरूलाई क्षतिपूर्तिको समेत फैसला भएको छ ।
नेपालमा दुराचार, विदेशमा अनुसन्धान र फैसला
अरू संगठित अपराधजस्तै गहिरो गरी अनुसन्धान गर्छ एन्टरपोलले बालयौन दुराचारको मुद्दा । नेपाली बालकहरूमाथि भएका धेरै यौनदुराचारका घटनाहरूको पीडकको आफ्नो देशमा अनुसन्धान र फैसलासमेत भएका थुप्रै उदाहरणहरू छन् ।
डच नागरिक पिट ह्यान भान तेरविस्गा ठमेलबाट पक्राउ पर्नासाथ उनको घरमा डच प्रहरीले छापा मार्‍याे । उनको घरमा भेटिएका नेपाली बालकहरूका अश्लील फोटो, भिडियो नेपाल प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको थियो । ती प्रमाणहरूलाई समेत आधार मानेर उनलाई दोषी ठहर गरिएको थियो ।
यौन दुराचारी, फ्रेन्च नागरिक जीन ज्याक हेयको मुद्दा त फ्रान्सको अदालतमा फैसला भएको थियो । सन् १९९९ मा पहिलो पटक छाउनीमा रहेको उनको बालगृहमा अप्राकृतिक यौन सम्पर्क गर्दागर्दै पक्राउ परेका उनी सन् २००२ मा रिहा भई फ्रान्स गएका थिए ।
फ्रान्स गएपछि पक्राउ परेका उनी भागेर स्तानबुल हुँदै नेपाल आएर ५ वर्षसम्म पोखरा, पर्वत र काठमाडौंमा लुकेर बस्ने क्रममा सन् २००९ मा पक्राउ परेका थिए । फ्रान्स सरकारले आफ्नो देशमा उनलाई लगी अदालतमा मुद्दा चलायो । नेपाली बालकहरूलाई यौन शोषण गरेको भन्दै फ्रेन्च अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरी १० वर्ष जेल सजाय सुनायो ।
नोभेम्बर २ देखि ९, २०१० (१६ कात्तिकदेखि २३, २०६७) मा भएको बहसपश्चात् फ्रेन्च अदालतले दोषी ठहर गरी नेपाली बालकहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला सुनायो । जसअनुसार नेपाली बालकहरूले क्षतिपूर्तिबराबरको रकम पाउने क्रम अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ र हेय जेल जीवन बिताई नेपाल आएका उनको हालै पर्वतमा मृत्य भएको छ ।
अन्त्यमा, गैरसरकारी संस्था खोली सामाजिक सेवा, पर्यटन, व्यापारलगायतका नाममा विदेशीलाई आमन्त्रण गर्ने नेपाली नागरिकहरूले एक पटक गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । कसैले अतिथि पाहुना बनी नेपाली बालकहरूलाई जीवनभर नबिर्सिने पीडा नदिइयोस् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको August 20, 2020 August 20, 2020 1 बर्ष अगाडी 2468 जनाले हेर्नुभएको